Izimbuzi | Umlimi wasemadlelweni we-intanethi | April 2020
Konke okudingeka ukwazi mayelana nobuchwepheshe bokudoba inhlanzi
Ukuze umndeni wakho nabangani bakho banenhlanzi enomsoco odoba inhlanzi, kufanele ujabule ubuchwepheshe bokudoba inhlanzi bese uzama ukubhema uhlobo oluthandayo lwenhlanzi wena. Inqubo yokubhema ayiyona inkimbinkimbi ekwenzeni njengoba ingase ibonakale ekuqaleni. Lesi sihloko sinikeza ulwazi mayelana nendlela yokubhema inhlanzi ekhaya nokuthi yiziphi izinhlobo zezihlahla okumele zikhethwe.
Indlela yokwakha isitoreji sembuzi ngokwakho: izincomo ezisebenzayo
Ngaphandle kokungabaza, isimo esibaluleke kakhulu sokukhiqizwa kwanoma yisiphi isilwane singumpilo, futhi singagcinwa kuphela ngokugcwaliseka kwezimo eziyisiboshwa zokuboshwa. Uma lo mbuzo uqondene nokugcinwa kwezimbuzi, kufanele kubone ukuthi kungakhathaliseki ukuthi uthatha igumbi, kungakhathaliseki ukuthi uyisigodlo, ugxilile, indlu yezimvu noma igumbi elihlukile elakhiwe ngokukhethekile, into eyinhloko ukuthi le ndawo ayibangeli izifo nokufa kwezilwane.
Indlela yokugcina nokuthi ungondla kanjani izimbuzi zobisi
Izimbuzi ziyizilwane ezingenakuzithoba ngokwemigomo yesondlo kanye nokudla, kepha umyalelo kufanele ube kukho konke. Ukuze isilwane sizibone ngokugcwele ngokwezifiso zobisi, izimbuzi kufanele zikhululeke ekamelweni lapho zihlala khona. Kufanele futhi babe nokudla okunomsoco ukuze umzimba uhambisane kahle nokudla ukukhipha umkhiqizo wobisi.
Indlela yokuphulukisa izimvu nezimbuzi kusuka ebhokisini
Izakhamuzi ekukhulunywe ngazo kwe-ingulube azikhumbuli neze ukuthi lesi sifo esesabekayo somuntu, esasifanele igama elibi elithi "ukufa okumnyama", liye lahlukunyezwa ngokugoma okukhulu phakathi nekhulu leminyaka elidlule. Kodwa abantu bendawo, ikakhulukazi ezindaweni zokulondeka kwezimbuzi zendabuko kanye nokuzingela kwembuzi zasendle, cishe akunakwenzeka ukucabanga ngabantu - kubo, izimvu nezimbuzi nezimbuzi futhi kuze kube namuhla zimelela ingozi enkulu ebhizinisini labo.
Amathiphu namasu wezimbuzi ezimnandi
Imbuzi - enye yezindawo ezinenzuzo kunazo zonke zokuphatha izilwane. Ukukhiqizwa kwezimbuzi kuhlanganisa inyama, ubisi, uboya, phansi kanye nezikhumba. Inzuzo enkulu yezimbuzi ikhona ekuzivumelaneni kwabo okuphezulu, ngakho ukukhulelwa kwezimbuzi ekhaya ngeke kubangele ubunzima obukhulu. Indlela yokukhetha imbuzi Ukukhethwa kwembuzi kufanele kuhanjiswe nayo yonke imithwalo yemfanelo.
I-Ketosis ngembuzi: izimpawu zesifo, ukwelashwa
Namuhla, izimbuzi ezifuywayo ezifuywayo zithandwa kakhulu emapulazini. Okuqukethwe kwabo ibhizinisi elinenzuzo kakhulu ngenxa yezindawo ezizuzisayo zobisi lwebhokhwe, inani lalo eliphakeme liqhathaniswa nezinkomo kanye nokuzinakekela kalula lezi zilwane, kodwa ngezinye izikhathi kuphakama izinkinga. Enye yalezi zinkinga i-ketosis.
Sebenzisa nokukhethwa kwemishini yokubamba izimbuzi
Muva nje, ukukhiqizwa kobisi okubhaliwe kuye kwavela ngemuva hhayi emapulazini amakhulu kuphela, kodwa nasemapulazini angasese. Ishintshwe indlela elula kakhulu yokuthola umkhiqizo owusizo wezilwane ezifuywayo - usebenzisa umshini wokubamba. Le ndlela ayisebenzisi nje kuphela ezinkabeni, kodwa nakwezinye izilwane, ikakhulukazi, izimbuzi.
Izifo zezimbuzi kanye nezici zokwelashwa kwazo
Imbuzi iyisilwane esithandwayo esinika izinga eliphezulu, ubisi obuphilile. Ungenakuzithoba, uvumelanisa kahle nanoma yiziphi izimo, udla cishe konke ukudla, uthola ukudla kalula futhi, ngokunakekelwa kahle nezimo, akubangeli izinkinga. Izimbuzi azivamile ukugula, kodwa udinga ukwazi ukuthi ungasifaka kanjani lokho isilwane esingenzile nokuthi singayiphatha kanjani.
Ubisi obuningi obunikeza imbuzi ngosuku
Izimbuzi zasemakhaya zivuswa ukukhiqiza inyama, ubisi, ubomvu nezikhumba. Labo abazobandakanya ukuzaliswa kwezimbuzi ngokuyinhloko banesithakazelo embuzweni wokuthi ubisi obuningi obungabunikeza isikhathi esithile futhi obangela ukuholela kulezi zikhombisi. Ake sibone ndawonye. Ngabe iziphi izimbuzi ezindala ziqala ukunikeza ubisi. Njengazo zonke izilwane ezivela esigabeni esiluhlaza, izimbuzi zinobisi esikhathini esilandelayo, ngoba injongo yaso eyinhloko ukondla inzalo.
Amafutha embuzi: yini ewusizo, yikuphi okuphathayo, indlela yokuqhafaza
Amafutha embuzi athandiswa kakhulu ekuphekeni nasekuphepheni okuhlukahlukene kwemithi yendabuko isikhathi eside kakhulu. Uma isetshenziswe kahle, le nsiza isisiza ukubhekana nokukhwehlela, izifo ze-catarrhal, izifo zamathunjini, izinkinga zesikhumba, njll. Yiziphi izakhiwo umkhiqizo, nendlela yokulungisa ukwelashwa okumangalisayo, esikucabangayo kulesi sihloko.
I-Goat Mastitis: Izimbangela Nokunakekelwa Kwezifo
Ukugcina izimbuzi endaweni epulazini kunenzuzo kakhulu, kungakhathaliseki ukuthi kuyinkathazo. Izilwane zidinga ukunakekelwa ngokucophelela, ngoba izimo ezimbi zezindlu zivusa ukubonakala kwezifo zezinkomo, ngenxa yokuthi ubani ongalahlekelwa kakhulu yizinzuzo ngisho nokulahlekelwa imfuyo. Enye yezifo yi-udder mastitis.
Imbuzi yeka ukunikeza ubisi: izimbangela nezindlela zokuqeda
Abanikazi bezinyosi bavame ukukhononda ukuthi isilwane sinciphise kakhulu ukukhiqiza ubisi noma sishiye ngokuphelele ubisi. Ukuze uqonde isizathu sokunciphisa ubisi, kufanelekile ukuhlaziya izimo lapho izimbuzi zigcinwa khona, nokuthi yini nokuthi zondliwa kanjani. Kungakhathaliseki ukuthi kuyadingeka yini ukwesaba ukuwa ngobisi Ngosuku usuku lwembuzi alusi ngaso sonke isikhathi lunika inani elifanayo lobisi.
Imbuzi ye-Okota: yini okufanele ukwenze, ikakhulukazi ukunakekelwa kwezingane
Izimbuzi ezibelethayo zingalimaza kakhulu ipulazi lakho ngemikhiqizo ebalulekile: ubisi, inyama, uboya kanye nesikhumba. Ukuze imfuyo ikhule ibe namandla futhi iphilile, abalimi kudingeka baqaphele izimpawu zokukhulelwa nemfuyo. Mayelana nokuthi izimbuzi zibizwa kanjani empilweni, ukuthi unquma kanjani ukuthi isilwane sakho maduzane sewundlu, ukuthi ungafunda kanjani ngamathambo okubeletha ekubelethweni kanye nezinye izinkinga zokuzalanisa lezi zilwane ozothola kulokhu kulesi sihloko.
Ukuzingela Imbuzi: Izimpawu Nendlela Yokuzikhomba
Lapho uzalisa izimbuzi, inqubo yokuxubha ibaluleke kakhulu. Ukuze wenze konke okulungile nangesikhathi, udinga ukwazi ukuthola ukuthi imbuzi ikulungele yini. Kuyini ukuzingela? Ukuzingela ukuzimisela ukushada; Le nqubo ibizwa ngokuthi i-estrus. Izilwane ezahlukene zihlukile.
Ngakanani imbuzi edingekayo ebusika nokuthi ingayilungisa kanjani
Ukuvuna i-hay yezimbuzi ebusika kuwumsebenzi onzima nesikhathi esiningi, izimpilo kanye nempilo yezinkomo ezinyangeni eziningi zixhomeke kwisinqumo sayo esifanele nesifike ngesikhathi. Ukusebenza ngezikhala kufanele kuqale ngasekupheleni kwentwasahlobo noma ekuqaleni kwehlobo futhi ungayeki kuze kube yilala ekwindla ukugwema izinkinga nokuphazanyiswa.
Indlela yokuhlaba kanye nokusika imbuzi
Izimbuzi zokubeletha endlini zibandakanya ukuhlatshwa nokuhlaselwa okuqhubekayo. Ukuqaphela ubuchwepheshe obufanele bokuhlatshwa kwezilwane kuzovumela ukugcina isikhumba nasoboya bembethe esimweni esihle, futhi kuzoba nomthelela omuhle ukunambitheka kwenyama. Indlela yokuhlaba ngokufanele imbuzi bese uhlukanisa isidumbu, ake sibone.
Imbuzi ayifuni ekuzingeleni: izindlela zokugqugquzela ukuzingela
Isizathu esiyinhloko sabalimi ukuzalisa izimbuzi yikhono lezilwane ukuzala ingane. Futhi ngenxa yalokhu umnikazi kufanele azi kahle ukuthi lo wesifazane uziphathe kanjani lapho efika ukuzozingela. Futhi-ke, kufanele ukwenze uma lokhu kungenzeki nokuthi kungani. Ukuzingelwa kuvame ukuqala nini? Ukukhulelwa ezinyangeni ezincane kuqala kusuka ezinyangeni ezingu-7-9, kepha kunconywa ukuthi abesifazane bafinyelela eminyakeni eyi-1.5.
Indlela yokunquma ukukhulelwa ngembuzi ekhaya
Abalimi abaningi abagcini izimbuzi ngenhloso yokuthola ubisi, kodwa futhi ukuzalana, ngakho-ke, ukulingana kwamasilisa nabesilisa ukubonakala kwezimbuzi kwenziwa. Ukuze ulondoloze impilo yezinsikazi futhi uqinisekise ukuthi kuvela inzalo enhle, udinga ukwazi ukuthi ungabheka kanjani ukukhulelwa kwesilwane, ukwazi ukuletha kahle futhi unikeze ukunakekelwa okudingekayo kumbuzi kanye nezingane ezisanda kuzalwa.
Ungabiza kanjani imbuzi?
Ukuzalwa kwezingane emndenini kubangela imizwa eminingi emihle, futhi kulokhu umbuzo wokukhetha isiteketiso sosana usana ngokushesha. Izimpongo ezincane zikwazi ukuqeqeshwa ngokuphawulekayo, ziyaqaphela abanikazi futhi zithinteke, ngakho ukukhetha igama kufanele zifinyelelwe kakhulu.
Igazi emanzini ambuzi: izimbangela nezixazululo
Ngokuvamile izimbuzi ziyadalwa ngenhloso yokuthola ubisi, njengoba inomsoco futhi inempilo kunenkomo. Ngokwemvelo, uma ukungcola kutholakala ebisi, izinga layo liyancishiswa kakhulu, futhi nalo inzuzo yebhizinisi iyancipha. Enye yezinto ezingcolile kakhulu ebisi yigazi. Thola ukuthi kungani kubonakala nokuthi ungakuvimbela kanjani.
Indlela yokwenza umphakeli wezimbuzi ngezandla zakho?
Ukusebenza kwezimbuzi kuxhomeke kwizinga lokudla. Enye yezinyathelo zokuqala ekuthuthukiseni ikhaya kubo imishini yokudla. Yiziphi izidingo zemiklamo yokudla nokuthi ungayenza kanjani, funda ngezansi. Izidingo eziyisisekelo kubanikazi bezinhlobo zanoma yiluphi uhlobo Imikhawulo esemqoka ukuthi imifino kumele ihlangane yilezi: ukuphepha; kalula ukusetshenziswa - umnikazi kufanele akwazi ukukhipha imishanguzo ngesikhathi esifushane; umphakeli kufanele abe nedivayisi elula, ngenkathi evikela ukondla ekuqedeni.
Kaprifol esifundeni saseMoscow: nini ukutshala nendlela yokukhula
Amagilebhisi angenasipiliyoni negama le-parade - i-Shahin yase-Iran
Izindlela zokuzalisa izinyosi zezinyosi
Izinhlobo eziyingqayizivele nenhle ze-Opuntia cactus
Ukuthena nokubumba ama-redcurrant bush
Euphorbia: kanjani ukunakekela ekhaya
Yini okufanele uyenze uma umhlophe noma ezinye izimbungulu zivele e-orchid? Ukuxilongwa, ukwelashwa, ukuvimbela
Ubuhle obungenasisekelo - Dracaena unbent